आज वर्षको पहिलो चन्द्र ग्रहण लाग्दै-यी ४ राशिलाई शुभ! – Hamrosandesh.com
आज वर्षको पहिलो चन्द्र ग्रहण लाग्दै-यी ४ राशिलाई शुभ!
काठमाडौँ, २५ पुस ।
सन् २०२० मा चार वटा चन्द्र ग्रहणहरु लाग्दैछन् । आज शुक्रबार पुस २५ गते सन् २०२० कै पहिलो ग्रहण चन्द्र ग्रहण लाग्दैछ ।*
शुक्रबार लाग्ने चन्द्र ग्रहण राति १० बजेर ५२ मिनेटदेखि प्रारम्भ भएर राति २ः५७ बजेसम्म ४ घण्टा ५ मिनेटसम्म चल्नेछ ।यसपटकको चन्द्र ग्रहण भारत, एशिया, यूरोप, अफ्रिका तथा अष्ट्रेलिया महाद्वीपहरुका *थुप्रै देशहरुबाट देख्न सकिनेछ ।
२०२० मा लाग्ने अन्य ग्रहण ५ जुन, ५ जुलाई र ३० नोभेम्बरमा पनि लाग्ने छन् । यो पटक चन्द्र ग्रहणका क्रममा चन्द्र मिथुन राशिमा बस्नेछ ।ज्योतिषका अनुसार जुन राशिमा ग्रहण लाग्छ त्यस राशिमा *सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने गर्दछ । यस ग्रहणमा मिथुन राशिले विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुने* ज्योतिषले बताएका छन् ।
यसपटकको चन्द्र ग्रहण उपछायाँ ग्रहण हुनेछ । जसमा चन्द्रमा पूर्ण रुपमा लुक्ने छैन, न त चन्द्रमाको कालो छायाँ पृथ्वीमाथि पर्नेछ । आंशिक छायाँ चन्द्रमा ग्रहण पूर्ण र आंशिक* चन्द्र ग्रहणभन्दा पनि कमजोर हुनेछ । त्यसैले यसलाई स्पष्ट* रुपमा देख्न सकिँदैन ।
चन्द्र ग्रहणको असर र फल
शुभ फल : कुम्भ, तुला, मीन, कर्कट